Saxeexyadii La Dhamaystiray Maanta Oo Khamiis Ah, Kuwa Qarka Loo Saaran Yahay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSaxeexyadii La Dhamaystiray Maanta Oo Khamiis Ah, Kuwa Qarka Loo Saaran Yahay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa
Saxeexyadii La Dhamaystiray Maanta Oo Khamiis Ah, Kuwa Qarka Loo Saaran Yahay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa
Dhaqdhaqaaq badan ayaa ka jiray suuqa iibka ciyaartoyda maanta oo Khamiis ahayd, waxaana jiray saxeexyo la dhamaystiray, kuwo si xor dhac ah loo gaadhay iyo warar kale oo xaasaasi ahaa.
RASMI: Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiis la gaadhay xiddiga reer England ee Jadon Sancho oo ay 73 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Borussia Dortmund.
HESHIIS DHAN: Kooxda reer France ee PSG waxay heshiis laba sannadood ah la saxeexatay difaaca reer Spain ee Sergio Ramos oo si bilaash ah ugaga soo wareegay Real Madrid kaddib markii uu qandaraaskiisu ka dhamaaday. (RMC)
RASMI: Weeraryahanka xulka qaranka Sweden ee Alexander Isak ayaa heshiis cusub u saxeexay kooxdiisa Real Sociedad. 21 jirkan oo ay doonayeen kooxo waaweyn oo Yurub ah ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo soconaya illaa 2026 oo uu ku joogayo Sociedad.
RASMI: Marseille ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay xiddiga khadka dhexe ee reer Brazil ee Gerson. Laacibkan ayay kasoo bixisay 20 milyan oo Euro oo ay kagala soo wareegay naadiga reer Brazil ee Flamengo. Waxa uu hore ugu ciyaaray kooxaha Roma iyo Fiorentina ka hor intii aanu ku laaban dalkiisa.
RASMI: FC Porto ayaa 2.2 milyan oo Euro kula soo wareegtay difaaca kooxda Santa Clara ee Fabio Cardoso. Fabio ayay Porto la tarsansiin doontaa Pepe iyo Ivan Marcano.
RASMI: Lionel Messi ayaa xor ka noqday Barcelona, waxaanu qandaraaskiisii dhamaaday 12kii habeenimo ee habeenkii Khamiistu soo gelaysay.
RASMI: Arsenal waxay dalab rasmi ah ka gudbisay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Talyaaniga ee Manuel Locatelli. Agasimaha ciyaaraha Sassoulo ee Giovanni Carnevali ayaa xaqiijiyey inuu soo gaadhay dalab ka yimid Arsenal oo ay kaga doonayso laacibkan.
Kooxda reer France ee Lille ayaa wada-hadallo kula jirta kubbad-sameeyaha Faransiiska ah ee Hatem Ben Arfa. 34 jirkan ayaa si xor ah uga tegay kooxda Bordeaux. (Le10 Sport)
Manchester United waxay qarka u saaran tahay difaaca Real Madrid ee Raphael Varane. Labada kooxood ayaa la sheegay inay is-fahan ka gaadheen iibka 28 jirkan, waxaana la filayaa in maalmo gudahood lagu dhamaystiro heshiiska. Varane oo qandaraaskiisa Madrid sannad ka hadhsan yahay ayay kooxdiisu diyaar u tahay inay iibis. (Sky Sports)
Liverpool ayaa fasaxday Ozan Kabak oo amaah ugaga yimid Schalke. Difaacan reer Turkey ayaa Anfield ku qaatay lix bilood oo ah, laakiin Reds ayaa go’aansatay in ay iska fasaxdo oo aanay fulinin qodob ku jiray heshiiska amaahda ahaa oo dhigayay inay 20 milyan oo Euro ku iibsadaan. (Marca)
Juventus ayaa kula tartamaysa Roma laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Granit Xhaka. Kabtanka hore ee Gunners ayaa soo galay diiradda tababare Max Allegri xilli uu Mourinho ka doonayo Roma. (Daily Star)
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara West Ham ee Declan Rice ayaa iska diiday heshiis cusub oo ay kooxdiisu u bandhigtay. Laacibkan ayaa doonaya inuu ka ciyaaro tartanka Champions League. Chelsea iyo Manchester United ayaa ku farxay go’aanka laacibkan. (GOAL)
Kylian Mbappe ayaa ku wargeiiyey kooxdiisa PSG in aanu heshiis cusub u saxeexayn iyadoo sannad kali ahi ka hadhsan yahay waqtiga uu ku egyahay qandaraaskiisu. (L’Equipe)
Liverpool ayaa suuqa ugu jira ciyaartoy khadka dhexe ah oo ay ku beddesho Georginio Wijnaldum oo si xor ah uga tegay. Wargeyska Daily Mirror wuxuu ku warramay inay doonayaan laacibka Atletico Madrid iyo xulka Spain ee Saul Niguez. Wargeyska Bild ee kasoo baxa Jarmalka ayaa isna sheegay in Reds ay danaynayso Christoph Baumgartner oo u ciyaara Hoffenheim. Wargeyska Liverpool Echo waxa uu isna qoray in Jurgen Klopp uu la dhacsan yahay laacibka reer Portugal ee Renato Sanches oo u ciyaara Lille.
Chelsea waxay dar-dar gelinayaa doonisteeda weeraryahanka reer Norway ee Erling Haaland. Labada wargeys ee kasoo baxa Ingiriiska ee Daily Mail iyo Daily Express ayaa tibaaxay in Blues oo uu hormood u yahay Roman Abramovich ay kalsooni ku qabaan in xagaagan ay lasoo wareegi doonaan Haaland.